Kungani Us - Yunis International Ukuhweba Co, Ltd.
Uyemukelwa kwi-YUNIS Trading
E-China i-ejenti yokuthenga kuwumsebenzi wobuchwepheshe. Ukuthenga okuthile kubonakala kulula kakhulu. Noma kunjalo, iqiniso lide kakhulu kunesimo esijwayelekile. Umsebenzi we-ejenti yokuthenga okhokhelwayo eChina uhlukile kwesuphamakethe.I-ejenti yokuthenga iyadingeka ukuthola ukuthi yini iklayenti linendaba nayo. Ukuze wenze lokho, umphakeli wokuthenga kufanele abe nolwazi oluhle ngomkhiqizo nentengo. iklayenti liyathanda.
Ngemuva kwalokho, uma uyiklayenti elisha, uthenga izimpahla ngokuthumela okuncane futhi ngomzuzu wokugcina, uzodinga umthengisi onobuhlakani impela, ozokwazi ukwanelisa izidingo zakho ngamanani, amanani kanye nemigomo.
Kungani udinga insizakalo yokuthenga yomenzeli eChina?
Ngakolunye uhlangothi, iningi lezimboni zamaShayina AmaScreen kanye nama-MID-wadogo alinayo ilayisense eqondile yokuthekelisa njengamanje futhi umthengi akanakuthenga ngokusemthethweni nangokuqondile kubo. Lawo mafektri azosebenzisa i-Exgen Agent yawo eChina ukuvikela izintshisekelo zawo. Abathengi banconywa ukuthi basebenzise eyabo i-Export noma i-ejenti yokungenisa ukuvikela izintshisekelo zabo eChina ezimweni ezinjalo. Ngakolunye uhlangothi, umthengisi oqeqeshiwe wokungenisa impahla noma osebenza ngaphandle uzosebenza njengabasizi bakho namehlo, bazokusiza ukuthi uqhubeke nokuthola amafektri anolwazi olungcono, ulawule ubungozi bebhizinisi, ulawule ikhwalithi futhi uphinde unikeze nezinsizakalo zokuthengisa ngemuva njll. E-China, Ngale ndlela iklayenti lingonga isikhathi nezindleko eziningi.
singanikeza okungenani umsebenzi noma izinsizakalo ezilandelayo zamakhasimende abo emhlabeni wonke:
· Sourcing abahlinzeki abasha noma amafektri
· Ukuhlolwa kwabahlinzeki bakho.
· Ukuxoxisana ngentengo
· Ukuthumela Nokulungiselela
· Imvume yokuba okuthile kwenzeke
· Ukulawulwa Kwokulawulwa Kwekhwalithi
· Isevisi yokuthengisa ngemuva